Golaha Federationka Oo Doortay Af-hayeen Cusub - Cakaara News
Golaha Federationka Oo Doortay Af-hayeen Cusub
Addis-Ababa(CN) Isniin, 5tii October 2015, Mudane Kassa Tekle Birhan wuxuu ahaa afhayeenka golaha federeshinka ee 5tii sano ee lasoo dhaafay. Mudane Kassa xiligu shaqada kujiray wuxuu muujiyay fir-fircooni, kago'naansho, shaqo wanaag aad dheeri u ah.
Hadaba, mudane Dr. Mulatu Teshome ayaa saaka furay shirka golaha federeshinka dalka golihiisa 5,aad kal-fadhigiisa 1,aad isagoo doctorku doortay 5 xubnood oo gudiga doorashada afhayeenka iyo afhayeen kuxigeenka ee golaha federeshinka.
Kadib dood dheer iyo iyadoo sharciga latixraacayo ayaa waxaa afhayeenka golaha federeshinka
loo doortay mudane Yelaw Abate oo horay u ahaa afhayeenka golaha xildhibaanada deegaanka Amara. Sidoo kale, waxaa afhayeen kuxigeenka golaha federeshinka loo doortay Maxamedrashiid xaaji oo horay isla booskan ujoogay.
Kadibna waxaa ladoortay in golaha federeshinku yeesho 3 gudi meeshuu horay ulahaa 2 gudi. Gudiyadan oo kala ah: 1. gudiga miisaaniiyada kabista iyo arimaha dakhliga, 2. gudiga midnimada dimoqraadiyada iyo waajibaadka dastuurka iyo nabadgelyada, 3. gudiga tarjumaada dastuurka iyo codsiyada cabashooyinka qomiyadaha.
Gudiga miisaaniyada kabista iyo Arimaha Dakhliga: mid kamid ah waajibaadka gudigan ayaa noqonaya: inay miisaaniyada dalka itoobiya leedahay dakhli, deeq iyo daynba sida dastuurku dhigayo kuqaybin doonaan. waxaana gudoomiyaha gudigan loo doortay mudane Abay Woldu. gudoomiye kuxigeenka gudiga ayaa loo doortay Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar. waxaana xubno ka ah gudiga madaxwaynaha Oromiya mudane mukhtaar khadiir, madaxwaynaha Amara mudane gedu anderge, madaxwaynaha shucuubaha koonfurta mudane Dessie dalke, madaxwaynaha Gembella mudane Gedwak, madaxwaynaha Benishangul mudane axmednaasir, madaxwaynaha hararida mudane muraad abdul hadi, wakiilka afar mudane awal arba, aragesh bayane iyo 2 xubnood oo kale.
Gudiga midnimada dimoqraadiyada iyo waajibaadka dastuurka iyo nabadgelyada: waxaa gudoomiyaha gudigan loo doortay mudane Kassa T. Birhan meesha kuxigeenkiisa looga doortay Ambassador Misganew Demese. gudigan ayaa waxaa xubin ka ah deegaankeena marwo Sucaad
Gudiga turjumida dastuurka iyo codsiyada cabashooyinka qomiyadaha: mudane Lemma megersa oo horay u ahaan jiray afhayeenka golaha xildhibaadanadadeegaanka oromiya ayaa noqday gudoomiyaha gudigan meesha deegaanka laga doortay afhayeenka golaha xildhibaanda ahna gudoomiyaha XDSHSI inuu xubin kanoqdo gudigan. mid kamid ah waajibaadka gudigan ayaa ah: sida kucad qodobka 39,aad ee dastuurka dalkeena-hadii mid kamid ah qoomiyadaha dalku codsado aayo katalin ilaa heer gu'itaan waa gudiga awooda uleh ama uxilsaaran inay baadho islamarkaana waa gudi keeni karta go'aanka ku aadan aragtidooda iyagoo go'aan talo bixin ah usoo gudbinaya golaha federeshinka.